Anesimba Anonamata Points Yeakanaka Kurara Kwehusiku | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Anesimba Anonamata Points Yeakanaka Husiku Kurara
Anesimba Anonamata Points Yeakanaka Husiku Kurara
Nhasi tichave tichitarisana nemasimba ekunamata mapoinzi ekurara zvakanaka usiku. Kune vanhu vazhinji, kurara kwakanaka kwehusiku chipo chakakosha kubva kumugadziri kupedza zuva rinonetsa. Zvisinei, kana kurara kwako usiku kwakambotambudzwa nehope dzinotyisa, iwe unogara uchitya kana kwasviba. Mwari ave kuda kuchinja iyo nyaya nhasi.
Zvisinei nekushushikana kwawakaenda mukati mezuva, kurara kwakanaka kwehusiku kunokwanisa kuzadza simba rakarasika uye kukuchengeta uchikurudzira zuva rinotevera. Kune vese imi munotya kuvhara maziso enyu husiku nekuda kwekugara hope dzinotyisa, Ndinotema nemasimba edenga kuti masimba iwayo anoparadza hope dzako aparadzwa nhasi muzita raJesu.
Baba vekudenga, ndinokutendai nenyasha dzenyu nedziviriro pamusoro pehupenyu hwangu nhasi. Ndinokutendai nekuti maziso aive pandiri pandakafamba nenyika yose nhasi uye tsitsi dzenyu dzakandiunzira runyararo kwete zvidimbu, zita renyu ngarikwidziridzwe.
Ishe Mwari, ndinotsvaga ruregerero rwezvivi zvandapara nhasi pandanga ndiri kunze. Chinyorwa chinoti hatigone kuramba tichigara muzvivi uye tichikumbira nyasha kuti dziwande. Tenzi ndinonamata kuti mundiregerere zvitadzo zvangu zvese nhasi muzita raJesu. Ndinokumbira kuti neropa rakakosha raKristu rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, uchasuka zvivi zvangu chose muzita raJesu.
Ishe Jesu, pandinoenda kunorara manheru ano, ndinonamata kuti mundipe zororo rakanaka. Ndinonamata kuti mundipe hope dzakanaka dzekurara. Shoko renyu rakandiratidza kuti ndakaita segwai uye munondichengeta somufudzi. Ndinoisa musoro wangu muhofisi yako manheru ano manheru ano, rega ngirozi dzako dzishande kumweya wangu manheru ano. I come against every power that spoil sleep with evil dreams, ngazviparadzwe pamberi pangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti mundipe hope dzakanaka dzehusiku kuti ndiwedzere simba rangu mubhizimusi remangwana. Ini ndinotsiura dhimoni rega rega rinotambudza hope dzangu nekunyepedzera. Ishe, pandinomuka kubva kuhope tommorow, zadzai moyo wangu nemufaro uye nemufaro kusangana nezuva idzva ramakaita. Ndibatsirei kuva netariro uye ndibatsireiwo mukuvaka kutenda kuti tommorow ichave iri nani kupfuura nhasi. Nekuti rugwaro rwunoti kubwinya kwekupedzisira kuchapfuura kwekutanga, ndinonamata kuti mangwana ave nani uye ave mukuru kupfuura nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti rugare rwenyu runopfuura kunzwisisa kwevanhu ruve pandiri pandinovata manheru ano. Ini ndinouya kuzopesana nemweya wese wekutya. Nekuti zvakanyorwa kuti, Mwari haana kutipa mweya wekutya asi wekutorwa kunochema Ahba baba. Ndinoporofita kuti handizotyi muzita raJesu.
Kwakanyorwa kuchinzi: Haungatyi chinhu chinotyisa usiku, kana museve unofamba masikati, kana hosha inofamba murima, Kana kuparadza kunouraya masikati. Ishe, ngirozi dzenyu dzichandinyaradza pandinorara manheru ano. Handizovhundutswa nekutyiwa kweusiku kwete nedenda rinofamba murima. Ndinonamata kuti makona mana emba yangu achengetedzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinotsiura mhando dzese dzehope dzakaipa dzinogona kuparadza husiku. Simba rega rega redhimoni rinoonekwa muhope kuti uriputse, ndinokupedza nemoto wemweya mutsvene. Ndinonamata kuti ishe ngavasimudze shongwe yemoto kutenderedza imba yangu uye vagadzire nharaunda yangu kusagadzikana kune chero rakaipa simba muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzorwa neese mhondi dzakaipa dzinoitwa usiku. Ini ndinoramba kuyedza kwese pahupenyu hwangu nehumambo hwerima. Ndinonamata kuti kuchengetedzwa kwaishe kuchave pandiri. Chinyorwa chinoti, pakutakura mucherechedzo waKristu, ngakurege kuva nemunhu anondinetsa. Ndinotema kuti ndirege kunetseka muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti mukomberedza hupenyu hwangu nerunyararo nerudo. Musarega mweya wangu uchinetseka, musarega kushungurudzika kwangu. Rega ndimbozorora manheru ano ndine tariro mamuri. Zvisinei nedambudziko kana dambudziko randinosangana naro, ndinotenda zvakasimba kuti ndimi Mwari uye mune simba rekuvatora. Saka husiku huno ndicharara kunge shasha, semurume asina dambudziko. Uye tommorow pandinomuka, ndinonamatira kugona kugamuchira zuva idzva riine mikana mikuru muzita raJesu.
Baba Tenzi, pachinzvimbo chekurota zvinotyisa, ndinonamatira kusangana, kwakadai kwandisingafi ndakakanganwa mukumhanya. Ndinonamata kuti muite kuti zviitike manheru ano muzita raJesu. Ndinonamata kuti pandinorara manheru ano, rega ndione ngirozi dzashe, ngadzindishumire.
Baba Tenzi, ndinokanda kushushikana kwangu kwese nekushushikana pandiri. Manheru ano ndichavata pasina dambudziko. Mashoko enyu anoti, Uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakuzorodzai. Takura joko rangu uye dzidza kubva kwandiri, nekuti ndiri munyoro uye anozvininipisa pamoyo, uye muchawana zororo remweya yenyu. Hongu, joko rangu rakareruka uye mutoro wangu wakareruka. ' Ishe, ndakaisa matambudziko angu pasi pamuchinjikwa. Dambudziko rega rega rinogona kuda kundikanganisa kurara manheru ano, ndinovaradzika pamuchinjiko manheru ano muzita raJesu.
Ishe Sezvakangoita munyori wePisarema achiti Murunyararo ndichavata pasi ndirare, nekuti ndimi moga Jehovha munondiita kuti ndigare ndakachengeteka. Ishe, ndinotenda kuchengeteka kwangu nemi kusiri kukanganisa. Nechikonzero ichi ndichavata pasi ndorara ndakatakura mune yangu kuti ndiri mwana wako uye uchandichengeta, uchandinyaradza nekundipa tsitsi.
Previous nyayaNzira Shanu Dzokunamata Mune Hondo Yemweya
inoteveraKunamata Points YeRuponeso
Victoria Gunyana 15, 2021 At 1:07 am
Mwari akuropafadze munhu waMwari nekugara uchindipa chinhu chekunamata nacho. Mukombe wako ngausatombooma.
70 Kununurwa Munamato Pfungwa Pamusoro Pamauto eRehena
Chishamiso Munamato wekutsvaga Rudo
30 minamato Yekutenda Yekuzvarwa Zuva Resimba
30 Matipi Emunamato Ekufambira Mberi Muhupenyu